Cajilada Vedio ee Sheekh Maxamed Ismail laga duubay Run ma aha ee waa Flim xun loo duubay.
Waxaa dhowr jeer si fiican u daawaday cajilada Vedio ah ee dhawaan lagu faafiyey saxaafada horta ah ,gaar ahaan Webside Internet-ka,kuna saabsan jidh dil la sheegay in loo gaystay Sheekh Maxamed Ismail oo ku xidhan Xabsigga dhexe ee Hargeysa.
Cajiladan waxaa ka hadlay dad fara badan oo ay ka mid yihiin ,Dowlada iyo Xisbiyada Mucaaradka ah ee Somaliland ,Waxaa banana baxyo laga sameeyey magaalooyin ku yaal Somaliland.
Waxaa kaloo fikrado kala duwan ka muujiyey Cajiladaas dad aad u fara badan oo reer Somaliland iyo Somaliya ka soo kala jeeda.
Dhinaca Somaliya waxaa hadlay Maxaakiimta ,caruur uu dhalay sheikh Maxamed Ismaciil ,koox isku sheegtay in ay ka soo jeedaan Somaliland kana tirsan yihiin waxa loogu yeedho Golaha Baarlamaanka ee DFKM.
Haddaba markaan dhowr jeer daawaday Cajiladaas,waxaa qabaa in ay tahay mid la been abuuray ,waxaanan ku cadeynayaa arimaha soo socda.
1. Cajiladu ma laha wax taariikh ah,lama garan karo xilliigii la duubay.
2. Ma jiraan wax cadeynaya in Cajiladaas lagu duubay xabsiga Hargeysa.
3. Indhaha Sheekh Maxamed waa la socdaan in Cajilad laga duubayo,weliba Sheekh Maxamed wuxuu mar kasta Indhaha kula xidhiidhayaa qofka Cajilada duubaya si uu uga gudbo suaashii hore.
4. Kama muuqdaan sheekh Maxamed wax muujinaya in uu ku jiro Ciqaab amase jidh dil,balse waxaa ka muuqda xaalad deganaansho,oo mararka qaarkood keenaysa in uu qoslo.
5. Sheekh Maxamed kama muuqdaan korkiisa wax nabaro ah oo ay keentay jidh dilkii loo geysanayey haba yaraatee.
6. Ma arag haba yaraatee wax nabar ah oo Sheekh Maxamed si toos ah iyo si dadban midna loogu dhufanayo,laakiin laba nin cagaha ayey dhulka la dhacayaan.
7. Nimanka Sheekha ka duubaya Cajilada waxay ku hadlayaan Luqad aan ahayn ta laga hadlo Somaliland .
8. Laba nin ee iska dhigaya in ay Sheekh Maxamed garaacayaan,waxa ay dhulka la dhacayaan Cagaha iyo Shaabuuga ay haystaan ,mana jiraan nabar ay si toos ah ugu dhufanayaan Sheekh Maxamed.
9. Suaalaha la weydiinayaa ma aha qaar haba yaraatee wax xidhiidh ah la leh dembiga loo haysto,waxaana wax lala yaabo ah ,waxa isu keenay U.S.A,Itoobiya iyo SNM.
10. Sheekh Maxamed waxaa marka ugu dambeysa ka mid ahaa erayadiisa “waa idiin saxeexayaa ,waan idiin saxeexayaa”,laakiin ma jirto cid weydiisay in wax saxeexo.
Haddaba 10 kaa qodob iyo qaar kale ,waxay ka mid yihiin waxyaabaha aan u daaliishanayo in cajiladani tahay been abuur loogu talo galay in lagu wax yeelaynayo sumcada dadka iyo dalka Somaliland.
Waxaan hadalka ku soo koobayaa dadka reer Somaliland waxaa la gudboon in ay ilaashadaan Qaranimadooda ay muda dheer u soo halgamayeen, Dowladana waxaa la gudboon si rasmi ah loo baadho arinta cid kasta oo ka qayb qaadatay been abuurkaas waxaa haboon in sharciga la horkeeno.